Nlekọta anụ bebies maka anụ: esi esi na ụmụ ehi mara abụba n'ụlọ - Anụ mara abụba - 2020
Atụmatụ nke na-eto eto ehi maka fattening: esi na ihe na-eri nri na-eto eto
Nye otutu ndi oru ugbo novice, o nwere ike iyi ka o ụmụ ehi na-eto eto maka anụ - enwe nsogbu ma dị oke ọnụ, ma na nzukọ kwesịrị ekwesị nke usoro a, na ime ihe ndị chọrọ maka ọnọdụ njide na nri nke ụmụ anụmanụ, oké ehi ozuzu maka anụ n'ụlọ ga-aba uru site na echiche akụ na ụba. Ihe a chọrọ maka nke a na ọnọdụ ndị dị mkpa iji nweta uru kachasị elu, anyị ga-akọwa n'okpuru ebe a.
Ngwurugwu na-eme ka ụmụ ehi maa abụba: otú e si azụ ụmụaka
Ezi nlekọta maka ụdị anụ
Kedu ka castration nke gobies si emetụta ọnụọgụ anụ
Agụba na-eto eto maka anụ: ịmụ nri
Ọ bụrụ na e nwere ebe ịta nri dị nso n'ugbo ahụ, ọ ga-aka mma ịzụta obere ngwaahịa na April, ọ bụ ezie na enweghị mpaghara dị otú ahụ maka anụ ọhụrụ, ị nwere ike ịmepụta pen dị iche, site na ịmepụta nkata na ọnụego 8-12 m² kwa isi. N'oge a, dị ka ahịhịa ndụ, nke nwere ọtụtụ vitamin ndị bara uru maka ahụ na-eto eto nke ehi.
Ọ dị mkpa! Ọ bara uru ịzụlite ehi, n'ihi na ha dị ngwa karịa ehi na-enweta ibu dị mkpa ma site na afọ mbụ nwere ike ịdị na-eru ihe ruru kilogram 400.
Achịcha nri na-ekere òkè dị ukwuu n'inweta azụmahịa, ma ọ bụrụ na ị na-ebuli nri ụmụ anụmanụ, ị ga-enweta anụ oriri na-edozi ahụ, ọ bụghị nanị maka ere ere, kamakwa maka nri gị. Ụmụ nwoke na-eto eto na-eri nri na nri, na ihe niile na-abịakwute ha n'ime ihe a na-eri na-erikarị ihe. Ka o sina dị, abụba mara abụba n'ụzọ dị ngwa ka nwere àgwà nke ya, nke a ekwesịghị ichezọ.
N'oge oyi, nri nke ụmụ anụmanụ kwesịrị ịgụnye hay, ihe ọkụkụ gbanyere mkpọrọgwụ na nri ụmụ anụmanụ, na oge okpomọkụ ọkọchị ga-anọchi ya. Onu ogugu kwa ubochi nke oke ehi bu n'arọ nke ahihia, ahihia abuo nke ahihia akuku, 1.5 kilogram. Ka ọ na-eru nso n'afọ, ọnụọgụ ntanetị dị mkpa kwesịrị okpukpu abụọ, ebe ọnụ ọgụgụ ndepụta belatara 1 n'arọ. Ụdị nri nri dị ka ndị a: na-aṅụ ihe ọṅụṅụ (ọ dị ezigbo mkpa ịgbakwunye vitamin pụrụ iche maka ụmụ ehi, ebe ọ bụ na ha bụ akụkụ dị oké mkpa n'ihi na ha na-eto eto ngwa ngwa), mgbe ahụ, nri na-edozi ahụ na n'ikpeazụ ahihia ma ọ bụ hay.
Enwere ike inye ọka a kpochapụrụ na ahihia ma na mmiri mmiri (swipes), ma, na mgbakwunye, ụmụ ehi chọrọ ọtụtụ mmiri ma ọ bụ okpukpu. Akwụkwọ nri (nri mmiri, poteto, skwọsh na ugu) kwesịrị ịsacha ya nke ọma ma kpochaa tupu ị na-eje ozi, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe rere ure ma ọ bụ ihe oriri dị iche iche.
Malite na ọnwa isii, a na-etinye ihe oriri n'ime nri nke oke ehi, naanị poteto ga-ebu ya ụzọ ma kpochaa ya. Mgbe ọ na-eto eto ehi maka anụ n'ụlọ, a na-amalite ịmị anụ ọkụkụ nwayọọ nwayọọ, dịka ngbanwe ngwa ngwa na nri a na-eri n'oge ahụ ga-eme ka mmebi nke usoro ọgwụ ahụ gwụ, anụmanụ ahụ ga-atụfu oke. Na nke mbụ, ha na-eri nri 10-15 n'arọ kwa ụbọchị (kwa isi), ma mee ka ọnụego ya ruo kilogram 70 kwa izu, na-azụ nwa ehi na ụtụtụ ma na-enye 50-100 g nke nnu.
Ọ dị mkpa! Nri nri dị mma inye mgbe roughage.
Ọkachasị nke ọma na ndị na-eto eto na-eto eto na mkpo nri, ọka na mkpụrụ osisi siri ike, ebe epupụta bụ akụkụ kachasị ọnụ ahịa. Ha nwere eriri, vitamin na ọtụtụ nnukwu nri dị mkpa.
E nwere ụzọ atọ dị mkpa nke ehi mara abụba maka anụ (nri nwere ike inwe ụfọdụ iche iche):
Nwa na - eto eto na - eto eto ruo mgbe ọ dị otu afọ na ọkara na ihe dị ka kilogram 400 (na - enye nri nri siri ike).
Ogologo - na-enye ọnwa 7-8 nke nri na-agafeghị oke, n'oge nke oke ehi na-eru 500 kg. N'okwu a, anụ ahụ bụ abụba ma kemmiri.
Ọkara (ma ọ bụ ụdị nke etiti) - nke a na-eri nri dị ukwuu maka 5-6 ọnwa na oke ibu nke ụmụ ehi ruo 400-450 n'arọ.
Site na ọnwa abụọ, a na-achụpụ ụmụ ehi gaa ebe ịta nri, ebe ha na-emekarị ruo awa 16 n'ụbọchị. Ọnọdụ bụ isi - ọnụnọ nke ebe shaded na mmiri zuru ezu. Ụmụ okorobịa na-eto eto nke dị afọ 1 (oge nke na-arụ ọrụ maturation) ga-abụrịrị na a ga-ejide ya, n'ihi na ha na-adị nwayọọ ma rie nri. Na nlekọta kwesịrị ekwesị na ndepụta zuru oke nke nri, otu nwa ehi-nwa ehi nwere ike ịdị arọ ruo 500 kg, ọ bụ ezie na ọkara a egosighị ihe karịrị 400 kilogram.
Na-azụ ụmụ na-eto eto kwesịrị ịbụ ugboro atọ n'ụbọchị, ọkacha mma n'otu oge ahụ. Ugbo ọ bụla na-eji atụmatụ nke aka ya na nri a na-emepụta maka steeti na-eme ka ọ dị mma. N'ọtụtụ ọnọdụ, anụ ahụ kwesịrị ịnweta ihe dị ka 600 grams nke ịdị arọ kwa ụbọchị. Mgbe ụmụ ehi na-eto eto nọ n'ụlọ, nhọrọ a kachasị mma, ebe ọ na-enye gị ohere izere imebiga ihe ókè: igbochi ma ọ bụ ịmegharị ụmụ anụmanụ na agụụ.
N'ime ọnwa mbụ mgbe a mụsịrị nwa (ọnwa 1-2), a na-enye nwa ehi naanị anụ ndị mmiri ara ehi, jiri nwayọọ nwayọọ na-agbakwunye ntakịrị obere hay, ọka wit ma ọ bụ ahihia akpọnwụ na nri. Ihe di otua a ga-enye aka n'eto oke oke ehi na mmepe nke afo ha. Site na ọnwa atọ ruo ọnwa isii, ụmụ ehi ndị a na-etolite maka protein kwesịrị ịba uru. Ya mere ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị kwadebere ọka wit, hay na akwụkwọ nri ndị dị ọcha.
N'ihi ihe ndị a na-emepụta, ehi ga-amalite ịmalite ikpo ahụ, site na asaa ruo ọnwa itoolu ma ọ bụ hay ga-abanye n'ime nri (dabere na oge nke afọ). N'ime ọnwa atọ gara aga tupu igbummadu, ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa ndị dị na menu a ji nwayọọ nwayọọ na-amụba, n'ihi na nke a na-atụnye aka na ọbụna ibu ka ukwuu. Na ịchọta nka a, ị ga - enweta azịza nye ajụjụ a bụ "Olee otú ị ga - esi zụọ ehi ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi?", Ma nweekwa ike ịdị arọ nke anụ ahụ, nke, dịka anyị kwuburu, kwesịrị ịdị n'ime 400 kilogram. N'okwu a, anụ ahụ dị nro na abụba. Oge kachasị mma maka ụmụ ehi na-egbu egbu bụ ọnwa 15-18, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ, maka ihe dịgasị iche iche, a na-eziga ụmụ anụmanụ n'ụlọ mkpofu n'oge gara aga.
Ị ma? Ezi nri nke ụmụ ehi abụghị nanị ihe na-emetụta ọnụọgụ anụ. Ọrụ dị mkpa na-eme ụdị anụmanụ ahụ, bụ onye a ma ama bụ Hereford.
Nri oriri a na - eri nri (ihe oriri ha na nri nwere ike iru 20% nke mkpokọta), ọka ma ọ bụ ọka bali, nnukwu akwụkwọ nri na ahihia, mmiri na - enweta mgbe nile (ọbụna mma - whey), nakwa inye ụmụ anụmanụ na ihe niile dị mkpa na ebe nchekwa dị ọcha ihe ndị na-emetụta ọganihu nke usoro ụmụ ehi na-eto eto maka anụ. Ka o sina dị, iji mkpuru ihe na-eto eto na-arụ ọrụ dị mkpa. N'oge ụfọdụ ndị ọrụ ugbo jụrụ iji ụdị ahụ ndị ọzọ, ndị ọzọ na-eji ha eme ihe nke ọma, nke na-adịghị njọ mgbe niile.
N'ezie, a na-ekekere maka ịkwalite anụ ehi n'ime ụzọ abụọ dị iche iche: ndị na-enyere ahụ aka iji ike ya rụọ ọrụ na 100%, na ndị na-enye aka na mmezigharị dị elu nke uto na ibu uru nke ụmụ anụmanụ. N'ezie, na ikpe ikpe a, ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ngwaahịa dị mma, ịkwesighi ịkọ banyere ezi uche nke nhọrọ a, ebe ọ bụ na ị nwere ike ime ka ọganihu nke oke ehi dị elu site na ibelata àgwà nke anụ ahụ, nke nwere ike ịnọgide na-abụ akụkụ nke kemịkal. N'ọnọdụ ọ bụla, nyere ndị ahụ na-akpali akpali bụ ọgwụ ndị na-eme ka mmụba na uru dị arọ nke ụmụ ehi na-eme ka ọ dị mma, naanị na ị ga-ekpebi ma ọ dị mkpa ka e nwee ọgwụ ndị ọzọ si mba ọzọ na anụ ahụ ndị a zụlitere.
Ya mere, anyị echepụtalarị ihe na otu esi esi azụ ehi maka abụba, ma nri dị mma na mgbe niile bụ ọkara ọganihu. Nkera nke abụọ bụ ịmepụta ọnọdụ kachasị mma maka ụlọ na iji hụ na e kwesịrị ilekọta ụmụ ehi. E kwesịrị ichebara nlezianya anya n'ime ụlọ ebe ehi dị, n'ihi na ebe nchekwa ha ga-akọrọ. Iji mee nke a, ọ dị mkpa iji wepụ ntụpọ ahụ dị ọcha kwa ụbọchị, na otu ugboro n'ọnwa iji dozigharịa ya.
Ilebara oke ehi anya n'ụlọ anya ga-enyere ha aka ịrịa ọrịa ma nye gị ohere ịba ngwa ngwa, n'ihi na ọ nweghị nkà na ụzụ bara ọgaranya nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla n'ime ụlọ nsị. A ghacha kpochapu nri ugboro atọ n'ụbọchị, mgbe nri ọ bụla nke ụmụ ehi. Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ime usoro ahụ mgbe niile, gbalịa ịchacha ụlọ ahụ, ọ dịkarịa ala maka abalị ahụ.
A na-eme ehi site na oke ehi ọ bụla n'elekere 8 ọ bụla, onye na-agwọ ọrịa ga-agbakọọ ọnụego kwa ụbọchị nke ụfọdụ ngwaahịa na-enweghị nsogbu ọ bụla, malite na nwa ehi na data mbụ. Echefula ndụmọdụ nke dọkịta, n'ihi na ụmụ anụmanụ kwesịrị ịnata ezigbo nri, ọ bụghị ịṅụbiga mmanya ókè ma ghara inwe agụụ. Nhọrọ dị mma bụ ihe ndabere maka uru dị arọ, n'enweghị ọrịa na oke ibu.
Ị ma? Ụfọdụ ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ na-ekwenye na ị na-eji nri ọka ọṅụṅụ dị ka nri kwesịrị ekwesị, nke ga-azọpụta gị ego ma belata anụ nke anụ.
N'adịghị ka ehi, ụmụ ehi na-edozi mma na pensịcha, ụfọdụ ndị na-agbanyekwa n'àkwà mmiri ha na agbụ ma ọ bụ ụdọ. Naanị n'ụzọ dị otú a ọ ga-ekwe omume ịkwụsị mmegharị nke ụmụ anụmanụ na-eme ihe ike na iji zere ihe ndị ha na ndị ọzọ bi na farmstead. Ọzọkwa, njigide nke mmegharị na-enye gị ohere ịbawanye ngwa ngwa, nke a na-apụghị ikwu banyere nhazi ịta nri. Otú ọ dị, ka nwa ehi ahụ wee nwee ezigbo agụụ, ọ ga-ewepụ ya kwa ụbọchị gaa n'ikuku ikuku, mgbe ọ na-agagharị, a na-enye ya swill na hay.
E nwere ọtụtụ iwu dị mfe nke ọ bụla onye ọrụ ugbo ọ bụla novice ga-agbaso mgbe ị na-ekpebi ịzụ ụmụ ehi maka anụ.
Ndị a gụnyere:
nyocha nke nwa ehi na nwa ehi tupu ịzụta;
na -eme ọgwụ mgbochi niile dịka afọ nke ụmụ anụmanụ si dị;
ọzụzụ maka ịga ije site na ọnwa mbụ nke ndụ (ma ọ bụ mgbe igirigi gbadasịrị);
ọdịnaya na ndò n'oge ihu igwe ọkụ;
Idebe iwu dị ọcha na pensị (ala ga-adị ọcha mgbe niile);
nzukọ nke na-eje ije mgbe niile na-eto eto na ngwaahịa, ma ọ bụghị ya, ehi ga-eme ihe ike ma na-egbu mgbu;
Idebe okpomọkụ n'ime ụlọ ahụ (okpomọkụ dị n'ime ụlọ ekwesịghị ịda n'okpuru +10 ° C);
ịkwụsị ijegharị ụmụ ehi mgbe ha na-etolite, ebe ọ bụ na n'oge a, ha na-eme ihe ike ma nwee ike ime ka ndị agbụrụ ibe ha gbue.
Naanị ma ọ bụrụ na ị na-echebara nuances niile a, ị ga-enwe ike nweta ihe kachasị dị irè na oke ehi na-abụ abụba nke ga-enye ego a chọrọ.
Olee otú castration nke ehi na-emetụta ọnụ ọgụgụ nke anụ
"Olee otú ehi na-abụ abụba?" na "Olee nwa ehi na-eri nri maka uru bara uru karịa?" - ajụjụ di oke mkpa, mana ndi ozo choro otutu ndi oru ugbo: "O bu ihe kwesiri igbatu umu ehi?". Nke mbụ, nke a bụ ụzọ kachasị mma isi mee ka anụmanụ ahụ dịkwuo mma, nke ga-eme n'ọdịnihu ga-egbochi nsogbu na ụdị nwoke ahụ na-eme ihe ike. Naanị, n'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike belata ọnụ ọgụgụ nke mmerụ ahụ ụmụ anụmanụ na-etinye n'ahụ ibe ha mgbe ha na-etolite.
N'otu oge ahụ, agụụ nke ndị a tụbara na-emewanye ka ọ dịkwuo elu, mana ngwongwo muscle na-enweta nwayọọ nwayọọ karịa nke ehi ndị na-abụghị nke a na-atụgharị (nke ọ bụla, anụmanụ dị otú ahụ dị ọtụtụ kilogram kilogram na-erughị). Ya mere, na-ekpebi ịkpụ ụmụ ehi, ị ghaghị ịghọta na ha ga-achọ nri ka ha wee nweta ibu, ebe ọ bụ na anụ ahụ na-etolite, ọtụtụ n'ime ehi ndị a dị oke ibu, nke na-emetụta anụ ahụ. Dị ka ihe ngwọta ga-edozi nsogbu a, a na-eme castration mgbe ọ dị otu afọ. Anụ nke ehi ndị na-adịghị mma na-enwe 1.5-2 ugboro karịa abụba karịa anụ nke ndị anaghị emepụta ihe, mana n'otu oge ahụ ọ dị nro ma dị nnọọ nro, ya na àgwà e ji mara ya. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe a gbasasịrị ya, anụ ọkụ nke anụmanụ na-ebuli elu karịa, ọkpụkpụ azụ dịkwa mfe. Site na nlekọta ahụ ike, usoro nke castration na-eme ka mwepụ nke ọrịa glands, na nke a na-eme mgbanwe na ọnọdụ homonụ na-enwe ọnọdụ oge na-eto eto.
Ọ bụrụ na ị kpebie na castration bụ usoro iwu, a ghaghị ime ya tupu enwee ike ịmalite inwe mmekọahụ, ma ọ bụghị tupu ọ dị afọ 6-6.5. Mmiri na-agba ọsọ ga-eme ka ọganihu nke oke ehi na oge nke ngwangwa ahụ ike. Otú ọ dị, ọ gaghị aba uru mgbe ị na-egbu oge, ebe ọ ga-esiri ya ike ịnagide ehi oke (karịsịa mgbe ọ bụ nwata).
A na-atụgharị ehi na-eto eto na mmiri tupu ha agawa ebe ịta nri. Ọ bụrụ na oge a, afọ nke anụmanụ anaghị eru ọnwa abụọ, usoro a na-egbu oge ruo n'afọ ọzọ.
A na-akpọ oke ehi na-eto eto n'ụlọ iji nweta anụ nwere usoro dị mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị ghọtara nke ọma ihe achọrọ n'aka gị, ma gbasoo ndụmọdụ niile ahụ. Isi ihe a na-azụ ahịa bụ nlekọta kwesịrị ekwesị, ọrụ nlekọta anụmanụ na oge dị elu. Naanị site n'ịgbaso ihe ndị a, ị nwere ike nweta ezigbo nsonaazụ mgbe ị na-azụ anụmanụ.